एकातर्फ आफ्नो मौलिकताको रक्षा, आफ्नो ईतिहासको संरक्षण, संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न पर्ने अवस्था छ भने अर्को तर्फ संस्कृतिको नाममा हुने घुसपैठ रोक्न पर्ने चुनौती पनि अहिलेको नेपाली पिडिको टड्कारो हो। कतै हाम्रा बाजे बराजुले मानि आएका, धानी आएका संस्कार, संस्कृति विलिन त हुने होइन? भन्ने पिडाले पोलेर धेरै नेपालीहरु आफ्नो रिति थिति, चालचलन, परम्पराको खोजि गर्ने, व्याख्या गर्ने र प्रलेखिकरण गर्ने मार्गमा अग्रसर छन्। तर यहि क्रममा त्रुटी भएमा हाम्रो संस्कृति नामेट हुनेछ र अरुको संस्कृतिलाई आफ्नो मानेर हामी अनेपाली बन्ने डर छ। आजको लेखमा विशेष गरि तिहारको सारंशमा व्याख्या एवं हाम्रो संस्कारहरु माथि नजानिँदो तरिकाले बाह्य संस्कार हावी बनेका छन् ! त्यसका कारण के हुन् ? भन्नेमा केन्द्रित छ।
तिहार नेपालको अद्वितीय चाड हो। हाम्रो शैलीमा संसारमा अन्त कतै पनि तिहार मनाइन्न। हाम्रो केहि संस्कृति, ग्रन्थ, देवी देवता र धर्मको नाम अन्यत्र पनि छन् तर हाम्रो सभ्यतामा आधारित चाड पर्व, परम्परा नै हाम्रो पुर्खाको विरासत हो। यसलाई अक्षुण्ण राख्ने, जिवन्त राख्ने र प्रदुषित हुने नदिने हामी सबैको दायित्व हो, पुर्खा प्रतिको सम्मान हो।
तिहारका पाँच तिथि ।
यमपञ्चकका पाँचवटा तिथि हुञ्छन्। प्रायजसो एउटा दिनमा एउटा तिथि पर्ने हुञ्छ। तर चन्द्रमाको स्थिति अनुसार कुनै तिथि केही घण्टाको लागि मात्रै पनि हुने गर्छन्, जसले गर्दा एउटै दिनमा दुइटा तिथि पनि पर्न जान सक्छ।
तिहारको पहिलो दिन काग तिहार हो। यो दिन कागको पुजा गरिन्छ। मिठो मिठो खानेकुरा खुलाइञ्छ। विशेषगरि पहिले पहिले काग कराएकोलाई संदेश आउँदै छ भनेर मानिन्थ्यो। पहिले, अहिलेको जस्तो फोन वा इन्टरनेटको जमाना नहुँदा कागले निकालेको ध्वनीलाई नै मुल्यांकन गरेर खुशी वा दुःखको खबर आउने छ भनेर आँकलन गरिन्थ्यो। तर एति मात्र होइन काग पर्यावरणको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। कागले खाना-जन्य फोहोर देखि सानो-तिनो प्राणि मरेमा खान्छ र कुनै ठुलो पशु मरेको देखेमा कागको आवाजले चिललाई पनि आकर्षण गरेर त्यो पशु कुहिन अघि नै चिल काग मिलेर वातावरण प्रदुषण, र दुर्गन्धित हुनबाट रोक्छन्। चराहरुमा सबै भन्दा दिमाग प्रयोग गर्ने काग नै रहेको वैज्ञानिक सोधले पनि पुष्टि गरेको छ। सन् २०११मा वासिंगटन विश्वविद्यालयका डा मार्जलफका अनुसार संसारभरी भेटिने बुद्धिमान (इण्टेलिजेण्ट) चरा काग हो। तीक्ष्ण वुद्धिको प्रतिक भनेर पनि कागलाई हाम्रा वुद्धिको मान गर्ने पुर्खाले सम्मान गर्ने चलन बसाएका हुन्।
तिहारको दोश्रो दिन कुकुर तिहार हो। सायद नेपाली समाजमा आजभोलि सबै भन्दा धेरै पालिने जनावर कुकुर नै बनेको छ। कुकुरले पहरा दिञ्छ, बफादारीको एकमात्र निष्ठायुक्त जनावर कुकुर हो। सन् २००७को अमेरिकामा प्रकाशित सोधपत्र अनुसार कुकुरमा मालिकलाई देख्दा खुशीको हर्मोन बहञ्छ र यदि मालिकबाट बिछोड भएमा डिप्रेसन पनि हुने पुष्टि भएको छ। त्यो स्तरको प्रेम गर्ने जनावर हो कुकुर। धार्मिक ग्रन्थको आधार मानेमा कुकुर भनेको भैरवको बहान हो। भैरव भनेको रक्षक हो। यसरी पनि कुकुर रक्षा सुरक्षामा काम आउने कुरा हाम्रा पुर्खाले पहिल्यै बुझेको प्रष्ट हुञ्छ। आजभोलि प्रत्येक देशका सैन्य एवं प्रहरीमा खोज अनुसन्धान र सुरक्षा सम्बन्धि गतिविधिमा कुकुरहरुको सहयोग लिने बारे सबैमा अवगत नै छ। कुकुरको महानताको लागि तिहारको दोश्रो दिन सम्मान गरिञ्छ, पुजा गरिञ्छ। टिका, माला सहित मिठो भोजन अर्पण गरिञ्छ। कुकुर तिहारकै तिथिमा विश्वव्यापी चलेको भाषा अनुसार,कुकुर तिहारलाई वर्ल्ड डग डे(विश्व कुकुर दिवस) भनेर मनाउन हामी सबै नेपालीले विश्व समुदायमा पहल गरौँ। र सबै देशमा हाम्रो अद्वितीय चाडको प्रसार गरौँ।तर यसको अर्थ नाम फेरौँ भन्ने नलागोस् ! हामीले नै हरेक वर्ष तिथि र मनाउने विधि निर्धारण गर्दिने र विश्वव्यापी हाम्रो कुकुर तिहारलाई अरुले उच्चारण र अर्थ बुझ्ने सहजता हेतु यो अवधारणा प्रस्तुत गरिएको हो।
तिहारको तेश्रो दिन दिउँसो गाई तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पुजा गरिञ्छ। गाईको महिमा बारे हाम्रा धार्मिक ग्रन्थ आयुर्वेद देखि आधुनिक औषधय विज्ञान नतमस्तक छ। गाईको भाइबले नै विभिन्न जीवनशैली सम्वन्धित रोग(लाइफ स्टाइल बेस्ड डिजिज)हरुबाट छुटकारा पाइने कुरा पुष्टि भै सकेको छ। गौको स्पर्शले ब्लडप्रेसरको रोग निको हुने कुरा नेपालमै भलुहिमा अवस्थित कामधेनु गौशालाका संचालक योगी सोमराजले बताउँदै आउनु भएको छ। पञ्चगव्यको प्रयोग बारे आयुर्वेद भरिएको छ। गौकै महिमा बारे आगामी कुनै लेखमा बताउने छौँ।
तेश्रो दिनको बेलुकी लक्ष्मी पुजा गरिञ्छ। पुराणका अनुसार समुद्र मन्थन हुँदा देवी लक्ष्मी अर्थात ऐश्वर्य, धन, दौलत, वैभव, श्रीको प्रकटीकरण यहि दिनमा भएको हो। समुद्र मन्थनको देव र अशूरले मथेको प्रसङ्गलाई शृष्टिको उत्पत्तिको सुरुवाती पललाई मानेर हेर्न सकिञ्छ। हाम्रा पुराणहरुमा त्यस्ता वैज्ञानिक प्रसङ्गलाई कथा बनाएर सुनाइञ्छ तर त्यसको भित्रि गुदी तत्त्व भने हामीले नै विमर्श गरेर निकाल्न पर्ने हुञ्छ।
डार्क मेटर र इनर्जी बीच फ्युजन वा फिसन वा अन्य केहि कोलिजनलाई नै मन्थन भनेर बुझेमा समुद्र मन्थनबाट उत्पत्ति हुने तत्त्व, रत्न, जीव जन्तुबारे उत्पत्ति वा शृष्टिको कोणबाट भेउ पाउन सकिञ्छ। यस भौतिक जगत चल्नलाई चाहिने सबै द्रब्य, मुल्य आदिको प्रकटीकरणको स्रोत हो लक्ष्मी। त्यस तत्त्वलाई नारीरूपमा पुजिञ्छ। दशैँ बारे हाम्रो अघिल्लो लेखमा नेपालको नारी शक्ति पुज्ने चलनको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसरी जीवनमा सहजता दिने सम्पूर्ण द्रव्य, स्रोत साधन प्रतिको कृतज्ञता हो लक्ष्मी पुजा।
तिहारको चौथो दिन हो गोवर्धन पुजा। कृषिमा आधारित हाम्रो प्राचिन जीवन शैली र हाल पनि कागजमा सिमित सहि तर कृषि प्रधान देश नै भनिञ्छ। कृषिको त्यो बेलाको जोताई गर्न, अन्नपात ओसार्न, दाहि लगाउन गोरुको प्रयोग गरिञ्छ र हाल पनि नेपालको केहि भूभागमा यो प्रचलन देख्न सकिञ्छ। गुण लगाएकालाई कृतज्ञ भएर सम्मान गर्ने नेपाली परम्परा हो र त्यसैको लागि गाई, गोरु र गोवर्धन पुजा गरिञ्छ।
नेपालमा मात्र त्यसमाथि नेवार समुदायमा तिहारको चौथो दिन स्वयम्को पुजा गर्ने पनि प्रचलन छ। म्ह पुजा। आफुमा पनि देउताको वास हुञ्छ यो हामी सनातानिको मान्यता हो। आफ्नो शरीरले यो जुनीमा मोक्ष सम्म अवश्य लैजाने छ भनेर आफ्नो शरीरप्रति पनि कृतज्ञ हुने ज्ञान हो म्ह पुजा। आधुनिक विज्ञानले पनि आफुलाई स्वयमले प्रेम गर्ने, आफ्नो अवस्था स्विकार्नेले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर राख्ने कुरा पुष्टि गरेको छ। म्ह पुजामा मण्डला, धुप, बत्ति, टिका र मिठो भोजनको प्रचलन छ। म्ह पुजाकै दिनबाट नेपाल संवतको नयाँ वर्ष पनि सुरु हुञ्छ। नेपाली सभ्यता र संस्कृतिहरूको धनि देश हो। सबैमा नेपाल संवत ११४२को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
नेपालमा तिहार पाँच दिनको हुन्छ। यसलाई यमपञ्चक पनि भनिञ्छ। यमराज र उनकी बहिनि यमुनाबाट नै यो तिहारको टिकाको सुरुवात भएको मानिञ्छ। जसलाई भाई टिका भनेर लोक कथनमा नामकरण गरिएको छ। प्राचिनकालमा यमराज आफ्नी बहिनीलाई भेट्न जाँदा बहिनीले टिका र मिठो भोजनले स्वागत गरिन्। हर्ष उल्लासको साथ् यमराजले यो दिन जसले पनि आफ्नी दिदि बहिनीको हातको टिका लगाउँछ, उनीहरुलाई यो दिन काल नआउने घोषणा गरेकाले सम्पूर्ण विश्वभरी दिदि बहिनिले दाजुभाईलाई टिका लगाइदिने परम्परा सुरु भयो। याँहा सम्म अन्यत्रका हिन्दुले पनि तिहार अपनाएको छन्। तर हाम्रो तिहारमा सप्तरंगी टिका, मखमली(सुपारी)फुल वा सयपत्री फुलका माला, ओक्खर, कटुस, कानमा तेल, कपालमा तेल, दुबो र जलले छेक्ने यी नेपालको मौलिक प्रचलन हुन्। आजभोली बजारिया प्लास्टिकका रेसाका झिलझिले माला लगाइदिने इण्डियन विकृति हावी बन्दै छ। चीउरि र सालको पातको टपरीमा राखिने सामग्री हाम्रो प्रचलन हो तर आजभोली स्टिलका थाल र अनावश्यक खर्चको रूपमा चाँदी आदिका थाल अपनाउन थालेको देखिञ्छ।
नेपालमा मात्र रहेको प्रचलन हो धेउसि/ देउसी र भैलो। गाउँ ठाउँमा आवश्यक बाटो, पाटि, पौवा निर्माण गर्न सबै मिलेर देउसी खेलेर रमाइलो साथ् खानपिन गरेर रकम संकलन गरिने चलन वा दान प्रदान गरिने चलन हो देउसी-भैलोको। तर आजभोलि रक्सि खाने, खसी काट्ने उद्देश्यको लागि देउसी भैलो खेलिने कुप्रथामा परिवर्तन हुँदै छ। नेपालका मौलिक लय-भाका, वाद्यवादनलाईपनि नजानिँदो तरिकाले हिन्दी गीत एवं आधुनिक गीतहरूले विस्थापित गर्दै गएको त छैन ? यतातिर पनि मध्यनजर गरेर लोक भाका, भेषभुषा, वाध्यवादनहरुलाई पनि यस्ता चाडपर्वहरुमा भरपुर प्रयोग गरेर पुस्ता हस्तान्तरण गराउन सकिञ्छ।
देउसी-भैलो बलि राजाले आफ्नो शिर समेत दान दिएको बामन आवतारको कथासंग जोडिञ्छ। किराँत समुदायमा पनि बलिहाङ्ग राजाबारे दान दक्षिणा र समाजसेवाको प्रसङ्ग अनुसार देउसी भैलो खेलिने परम्परा छ।
यसरी नेपालको हरेक दिदि भाईको नाताको, पारिवारिक र सामाजिक सद्भावको चाड हो तिहार।
यस तिहारमा देखावटी गर्न भन्दा हृदयबाट संस्कार संस्कृति बचाउन सबै नेपालीमा हौसला मिलोस्। दियोलाई झिलझिलेले विस्थापित गर्न नसकोस्। पटका पड्काएर अन्यत्रको परम्परा देशमा नलादियोस्। हिन्दि टिभी, फिलिम, सिरियलले पारेको दुस्प्रभाव र मौलिकता माथिको प्रहार विफल भैजाओस्।
सबैमा इमान निष्ठा सहित श्री-सम्पत्ति आर्जन गर्ने आत्मसम्मान पलाओस्। देवी लक्ष्मीको वास होउस्। तिहार २०७८को हार्दिक मंगलमय शुभकामना।